ကိုဗစ် ကို တွန်းလှန်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ရဲ့ ရင်တွင်းက အမှန်တရား စကားများ – Let Pan Daily
ကိုဗစ် ကို တွန်းလှန်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ရဲ့ ရင်တွင်းက အမှန်တရား စကားများ
ကိုဗစ်ကို ရတဲ့နည်း နဲ့ တွန်းလှန်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သားတွေ ရဲ့ ရင်ထဲက အမှန်တရားစကားများ…
ဘုန်းတော်ကြီးတွေကပြောတယ် “လူတွေ ဒုက္ခရောက်နေပြီ၊ ရအောင်ကယ်ကိုကယ်မယ်”တဲ့…. ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောတယ် “ကျမတို့အစိုးရကတော့ ပြည်သူတစ်ယောက်ချင်းကိုတန်ဖိုးထားပြီး အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်သွားဖို့ သန္နိဌာန်ချ ထားပါတယ်…. တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် စည်းကမ်း လိုက်နာခြင်းနဲ့ ပြည်သူအားလုံး ကျမတို့ကို ကူညီပေးကြပါ” တဲ့…
ဆေးဝန်ထမ်းတွေကပြောတယ် “ငါတို့သေကာမှသေရော၊ လူနာတွေတော့မသေစေရဘူး”တဲ့…ဝန်ထမ်း‌တွေကပြောတယ် “ငါတို့ ကူနေတာတွေ မီဒီယာမှာ မပါလည်း အရေးမကြီးပါဘူးကွာ၊ အားလုံးအဆင်ပြေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်”တဲ့
လုပ်ငန်းရှင်တွေ ကပြောတယ် “စည်းစိမ် ဟာပြန်ရှာလို့ရတယ်၊ ငါတို့ တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတာတော့ ကြည့်မနေနိုင်ဘူး”တဲ့ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တွေ ကပြောတယ် “စောင့်ကြည့်လူနာတွေနေဖို့ခက်ကုန်ပြီ၊ ဒို့ ဟိုတယ်တွေယူသုံးလိုက်ပါ”တဲ့..
ပရဟိတ သမားတွေကပြောတယ် “မောနေပြီ ဒါပေမဲ့ မတတ်နိုင်ဘူး၊ ပြည်သူပြည်သားတွေငတ်မှာတော့ ထိုင်မကြည့်နိုင်ဘူး၊ ရှိတဲ့အား တော့သုံးရမှာပဲ”တဲ့၊ ရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ စက်ကရိယာတွေတီထွင်နေတဲ့ လူငယ်‌လေးတွေကပြောတယ်~ ထမင်စားချိန် မမှန်တာအရေးမကြီးဘူး၊ ဒါလေးအောင်မြင်ရင် အားလုံးအဆင်ပြေပြီ”တဲ့..
အသက်ရှုစက် အတွက် လုံးပမ်းနေတဲ့ ဆရာတွေကပြောတယ်~ “အိပ်ချိန်မရှိသလောက်ပါပဲ၊ ဒီစက်လေးရရင်လူနာတွေအသက် ရှုနိုင်ပါစေတော့”တဲ့…၊ အဆိုတော်တွေ ကပြောတယ် ပြိုင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ သီချင်းလေးတွေနဲ့တတ်သလောက် ပညာကူပေးနေတာပါ၊ စိတ်လေးတွေ သက်သာပါစေ တော့ဆိုပြီး”တဲ့..
တရားသမားတွေကပြောတယ် “ရွတ်ကြပါ ဖတ်ကြပါ၊ လူနာတွေအကုန် အသက်ရှင်ပါစေ”တဲ့.. ငွေကူဖို့ မလွယ်တဲ့ လူတွေကပြောတယ် “ကူဖို့ပိုက်ဆံ မရှိပေမဲ့ ကူဖို့အားတွေရှိတယ်၊ သယ်ပေးမယ် ကူပေးမယ်၊ ငါတို့ အား တွေသုံးပါ”တဲ့..
ဆန်ဝေနေသူတွေကို ဖိနပ်တောင်မပါတဲ့ ကလေးတွေက ပြောတယ် “ကူသယ်ပေးပါရစေဦးဦးရယ် သားတို့်ကူချင်လို့ပါ”တဲ့.. ၊ Covid 19က…”ငါမှားပြီ- ဆင်းရဲတဲ့ တိုင်းပြည်မို့ အထင်သေးခဲ့တာ ဒီတိုင်းပြည်ဟာ ကမ္ဘာ မှာ စိတ်ဓါတ် အချမ်းသာဆုံး တိုင်းပြည်”တဲ့.. ဖျက်ဆီးရန် လုံးဝ(လုံးဝ)မသင့်တဲ့လေ..
ကိုဗဈကို ရတဲ့နညျး နဲ့ တှနျးလှနျနကွေတဲ့ မွနျမာနိုငျငံ သားတှေ ရဲ့ ရငျထဲက အမှနျတရားစကားမြား…
ဘုနျးတျောကွီးတှကေပွောတယျ “လူတှေ ဒုက်ခရောကျနပွေီ၊ ရအောငျကယျကိုကယျမယျ”တဲ့…. ပွညျသူ့ခေါငျးဆောငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ပွောတယျ “ကမြတို့အစိုးရကတော့ ပွညျသူတဈယောကျခငျြးကိုတနျဖိုးထားပွီး အကောငျးဆုံးစောငျ့ရှောကျသှားဖို့ သန်နိဌာနျခြ ထားပါတယျ…. တညျတညျငွိမျငွိမျ စညျးကမျး လိုကျနာခွငျးနဲ့ ပွညျသူအားလုံး ကမြတို့ကို ကူညီပေးကွပါ” တဲ့…
ဆေးဝနျထမျးတှကေပွောတယျ “ငါတို့သကောမှသရေော၊ လူနာတှတေော့မသစေရေဘူး”တဲ့…ဝနျထမျး‌တှကေပွောတယျ “ငါတို့ ကူနတောတှေ မီဒီယာမှာ မပါလညျး အရေးမကွီးပါဘူးကှာ၊ အားလုံးအဆငျပွဖေို့ အရေးကွီးပါတယျ”တဲ့
လုပျငနျးရှငျတှေ ကပွောတယျ “စညျးစိမျ ဟာပွနျရှာလို့ရတယျ၊ ငါတို့ တိုငျးပွညျဒုက်ခရောကျနတောတော့ ကွညျ့မနနေိုငျဘူး”တဲ့ ဟိုတယျပိုငျရှငျတှေ ကပွောတယျ “စောငျ့ကွညျ့လူနာတှနေဖေို့ခကျကုနျပွီ၊ ဒို့ ဟိုတယျတှယေူသုံးလိုကျပါ”တဲ့..
ပရဟိတ သမားတှကေပွောတယျ “မောနပွေီ ဒါပမေဲ့ မတတျနိုငျဘူး၊ ပွညျသူပွညျသားတှငေတျမှာတော့ ထိုငျမကွညျ့နိုငျဘူး၊ ရှိတဲ့အား တော့သုံးရမှာပဲ”တဲ့၊ ရတဲ့ပစ်စညျးနဲ့ စကျကရိယာတှတေီထှငျနတေဲ့ လူငယျ‌လေးတှကေပွောတယျ~ ထမငျစားခြိနျ မမှနျတာအရေးမကွီးဘူး၊ ဒါလေးအောငျမွငျရငျ အားလုံးအဆငျပွပွေီ”တဲ့..
အသကျရှုစကျ အတှကျ လုံးပမျးနတေဲ့ ဆရာတှကေပွောတယျ~ “အိပျခြိနျမရှိသလောကျပါပဲ၊ ဒီစကျလေးရရငျလူနာတှအေသကျ ရှုနိုငျပါစတေော့”တဲ့…၊ အဆိုတျောတှေ ကပွောတယျ ပွိုငျနတော မဟုတျပါဘူးကှာ၊ သီခငျြးလေးတှနေဲ့တတျသလောကျ ပညာကူပေးနတောပါ၊ စိတျလေးတှေ သကျသာပါစေ တော့ဆိုပွီး”တဲ့..
တရားသမားတှကေပွောတယျ “ရှတျကွပါ ဖတျကွပါ၊ လူနာတှအေကုနျ အသကျရှငျပါစေ”တဲ့.. ငှကေူဖို့ မလှယျတဲ့ လူတှကေပွောတယျ “ကူဖို့ပိုကျဆံ မရှိပမေဲ့ ကူဖို့အားတှရှေိတယျ၊ သယျပေးမယျ ကူပေးမယျ၊ ငါတို့ အား တှသေုံးပါ”တဲ့..
ဆနျဝနေသေူတှကေို ဖိနပျတောငျမပါတဲ့ ကလေးတှကေ ပွောတယျ “ကူသယျပေးပါရစဦေးဦးရယျ သားတိျု့ကူခငျြလို့ပါ”တဲ့.. ၊ Covid 19က…”ငါမှားပွီ- ဆငျးရဲတဲ့ တိုငျးပွညျမို့ အထငျသေးခဲ့တာ ဒီတိုငျးပွညျဟာ ကမ်ဘာ မှာ စိတျဓါတျ အခမျြးသာဆုံး တိုငျးပွညျ”တဲ့.. ဖကျြဆီးရနျ လုံးဝ(လုံးဝ)မသငျ့တဲ့လေ..
ခုနျပြံကြျော ကူးစကျပွီး မာယာမြားလှနျး လှတဲ့ ကိုဗဈ
မင်္ဂလာဦး ညမှာ လူရော စိတ်ရော မောသွား ရတဲ့ သတို့သား